Iska horimaad Ciidamo ka wada tirsan DKMG ku dhexmaray degmada Yaaqshid
May 14, 2012 Markacadeey
Iska horimaadkaani ayaa waxaa Ciidamo ka wada tirsan dowladda KMG Soomaaliya ku dhexmaray degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir.
Goobjooge ku sugnaa degmada Yaaqshid ayaa waxa uu sheegay in Ciidamo Militari ah oo ka tirsan dowladda ay dhac u gaysteen Haween qaad ku iibinaysay, taasina ay keentay inay ku baxaan ka tirsan kuwa booliska, Militariga, kaddibna uu bilowday iska horimaad dhexmaray ciidamadaasi.
Inta la’ogyahay 2-askari ayaa ku geeriyooday 2-kalena way ku dhaawacmeen kuwaasi oo loo qaaday Xarumaha Caafimaad ee ku yaalla Magaalada Muqdisho, waxanaa sidoo kale la sheegay inay gacanta lagu dhigay mid ka mid ah askartii wax dhacaysay sida Idaacadda Shabelle ay u sheegeen goobjoogayaasha.
Dhinaca kale dadka ku sugan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka cabanayaan rag ku libasan dareeska Ciidamada dowladda KMG ah oo dhibaato ku haya dadka ku sugan halkaasi oo ay kala kulmaan dhac baahsan.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka dowladda KMG Soomaaliya ee degmadaasi oo ku aaddan iska horimaadkasi, inkastoo inta badan Magaalada Muqdisho uu iska horimaad ku dhexmaro Ciidamada dowladda kuwaasi oo qasaaro u gaysta dadka rayidka ah.